USomlomo waseKZN uhlola izikole esifundazweni – SIVUBELAINTUTHUKO
USOMLOMO wesiShayamthetho saKwaZulu-Natal uNkk Nontembeko Boyce ujube ithimba lamalungu esishayamthetho sesifundazwe ukubheka ukusebenza kwezikole ezifundeni okubalwa kuzona nesaseThekwini uhambo lwalo oluqale ngoLwesithathu lomhlaka 26 noLwesine lomhlaka 27 kuJanuary.
Leli thimba lamalungu esishayamthetho belihambisana nezikhulu zoMnyango wezeMfundo, izikhulu zezemfundo namalungu ezigungu zezikole (school governing bodies).
NgoLwesihlanu lomhlaka 28 isifunda ngasinye sethule umbiko ngalokho okutholiwe ukuze kuphuthunywe lezo zincomo ezidinga ukuhlangatshezwa ngokushesha okuye kwavela emjikelezweni waleli thimba ebelijutshiwe.
Umbiko uzonkankanywa yikomidi lesishayamthetho elibhekele ezemfundo bese kuthi mhla kuhleli iphalamende usomlomo adlulise lo mbiko kuNgqongqoshe woMnyango wezeMfundo kubhekwe lokho okuzobe kutholiwe.
Kuyothi ngoJune lezo zikole ziphinde zihanjelwe yithimba lamalungu esishayamthetho kuyobhekwa ukuthi lokho okwakuphakanyisiwe kuhlangatshezwane kanjani nakho.